4 Qodob oo Sababa in Gabadha Jacaylkii ay kuu qabtay uu dhammaado - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»4 Qodob oo Sababa in Gabadha Jacaylkii ay kuu qabtay uu dhammaado
4 Qodob oo Sababa in Gabadha Jacaylkii ay kuu qabtay uu dhammaado
Waa dhaawac daran marka ay haweeney aad shukaansaneysid ay kuu sheegto inaysan markaas wixii ka dambeeyo aysan ku jecleyn, maxay ku burburisay jacaylkii idinka dhexeeyay adigoo isleh wax walba sidii loogu talagay ayay u socdaan.
Aayaha Online, ayaa kaa shaafineysa ee hoos ka aqriso qodobada sababa arrintaas.
4 Siyaabood oo lagu hanto qalbiga nin oo aysan garaneyn haween badan
Waxyaabaha Ay Tahay Inaad Ogaato Kahor Intaadan Shukaansan Haweeney Oohin Badan
Waxay joojisay kalgacaylkii ay kuu heysay maxaa yeelay isbedel ayaa ku yimaaday, waxayna dareemeysaa inaadan ku habbooneyn, dad way isbedelaan taasina waa xaqiiqda nolosha.
Haddii aad haweeney la soctid ay isbedesho isla markaana ay dareento inaadan ku habbooneyn, waxaa kugu habboon inaad ka tagtid, waligaa naftaada haku qasbin qof aanan ku rabin.
Way kugu caajistay
Way fududahay in xiriirka marka uu waqti dheer qaato lagu caajiso, wax kasta waxa ay noqdaan wax la saadaalin karo waxayna la yaabtaa halka ay farxaddii aaday.
Si aad uga hortagtid in saaxiibtaa aysan kugu caajisin isla markaana aysan kaa tagin, isbedel sameey.
Waxay dareentay dayacaad
Haweenka waxay jecelyihiin qiimeyn iyo kalgacayl, sidaa darteed way kaa tageysaa haddii ay dareento inaad dayacday.
Waxaad iskaga ilaalin kartaa qaladkaan inaad xushmeysid oo qiimo u yeeshid isla markaana aad tustid inay kugu weyntahay, haka mashquulin inaad waqti wanaagsan la qaadatid.
Waxay la kulantay qof cusub
Mararka qaar haweenka waxay dareemaan in ninkooda aysan ka helin jacayl ku filan iyagoo xiriir la sameeya nin kale.
Mararka qaar arrintaas ayay sameeyaan iyagoo aanan ku heynin sabab wanaagsan.
6 Waxyaabood Waa Inaad Kala Hadashaa Lamaanahaaga Kahor Guurka
Calaamadaha lagu garto inaadan ku qanacsaneyn guurkaaga
3 Calaamadood Oo Lagu Garto In Ninka Uusan Ku Rabin — Ka Dhaqaaji
UGAAR AH DUMARKA: Ragga Leh Saddexdaan Astaamood Ee Gaarka Ah Waa Cajiib
Cudurrada Galmada: Maxaad ka taqaan 4-ta Cudur ee cusub ee halista?
Wax Ka Ogoow Cudurrada Halista Ah Ee Qaruhu Uu Ka Hortagi Karo
5 Calaamadood Oo Lagu Garto Marka Gabadha Ay Kugu Daneysaneyso
3 Cunto Oo Dhibaato U Keena Caafimaadka Shahwada Ninka (Ka Fogoow)
Wax ka ogoow nafaqada iyo caafimaadka Mooska